Orinasa mpangataka masoandro, mpamatsy - mpamokatra China Solar Applications
VOAFONY VOLOMBELONJARA AZO ...
LED milina avo lenta avo lenta ...
PUMPS POOL MASINA
Jiro MAZO INDRINDRA
Hery LED: 20W ~ 60W
Haavo lava: 5m ~ 9m
Fahombiazana mamirapiratra:> 130 lm / w
Sehatra fampiharana: Làlana an-tanàna, arabe, lalambe, faritra ho an'ny daholobe, distrikan'ny varotra, toeram-piantsonana, Park, Campus.
Jiro MAZAVA MAZAVA MAZAVA
Hery LED: 20W-60W
Ny jiro golf masoandro dia miaraka amina endrika kanto sy famolavolana modely fampidirana.
Ny ekipa mpamorona indostrialy matihanina dia manamboatra tontonana masoandro, loharano maivana, mpanara-maso, batery mifangaro; Miaraka amin'ny Philips Lumileds, ny fantsom-pahazavana, ny fivoahan'ny hazavana, ny fahombiazany ary ny fiainana amin'ny serivisy dia mifanaraka amin'ny fenitra iraisam-pirenena.
MAZAVA FANAMARANA MAZA MAVAINA
Ny jiro amin'ny masoandro feno masoandro dia miaraka amina endrika kanto sy famolavolana modely fampidirana izay mora kokoa amin'ny fametrahana sy serivisy.
Compact dia vita amin'ny modely LED mahomby be, trano fanaovan-jiro tsy tantera-drano, bateria lithium maharitra fiainana, ary maso kely mifehy ny maso.
Ampiasaina hampiakarana ny tsindry rano. Avelao ny rano hoentina any amin'ny faritra avo kokoa sy lehibe kokoa. Miara-miasa amin'ny angovo avy amin'ny masoandro, io no fomba famatsian-drano manintona indrindra any amin'ny faritra be masoandro amin'izao tontolo izao, indrindra amin'ireo faritra lavitra tsy misy herinaratra.
PUMPS MASINA MAHARITRA
Ny paompy avy any anaty rano dia mampiasa angovo azo avy amin'ny masoandro hantsaka sy hitatitra rano. Paompy tafiditra ao anaty rano izy io. Io no fomba famatsian-drano manintona indrindra any amin'ireo faritra manankarena masoandro amin'izao tontolo izao ankehitriny, indrindra any amin'ny faritra lavitra izay tsy misy herinaratra. Ampiasaina indrindra amin'ny famatsian-drano an-trano, fanondrahana fambolena, fanondrahana zaridaina sns.
Ny paompy amin'ny dobo an'ny masoandro dia mampiasa angovo avy amin'ny masoandro hamoahana paompy pisinina. Tian'i Aostralia sy ny faritra faritra Sunny hafa izy io, indrindra any amin'ny faritra lavitra izay tsy misy herinaratra. Ampiasaina indrindra ao amin'ny rafi-pandehanan'ny rano amin'ny dobo filomanosana sy ny toerana fialamboly.
PUMPS LEHIBE lalina
Paompy izay alentika ao anaty fantsakana anaty rano ambanin'ny tany izy io mba hikarohana sy handefasana rano. Ampiasaina be amin'ny famatsian-drano any an-toerana, ny fanondrahana sy ny fantsona, ny indostria sy ny fitrandrahana harena ankibon'ny tany, ny famatsian-drano an-tanàn-dehibe ary ny lakandrano.
30M BRUSHLESS DC SOLAR PUMP AMIN'NY RANO PLPICIC IMPELLER
Anaran'ny marika: paompy Qingeal
Laharana modely: 4FLP4.0-35-48-400
Toerana niaviany: Zhejiang, Sina (Tanibe)
Fampiharana: fitsaboana rano fisotro, fanondrahana ary fambolena, milina
Herin-tsoavaly: herin-tsoavaly 0,5
Fanerena: tsindry ambony, fanerena avo
4INCH PUMP DIAMETER HEVITRA MISY PORMA SOLAR PUMPS DC DEP WELL PUMP RANO
Laharana modely: 4FLD3.4-96-72-1100
TOSIKARATRA: 72v, 72v